Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အဓိကရုဏ်းကြောင့် သေဆုံးသူ (၉) ဦး ကူတောင်ရွာမှာသင်္ဂြိုဟ်
အဓိကရုဏ်းကြောင့် သေဆုံးသူ (၉) ဦး ကူတောင်ရွာမှာသင်္ဂြိုဟ်
ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့က ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကူတောင်ကျေးရွာ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့လူ ၁၀ ဦး အနက် (၉) ဦးကို ဒီကနေ့ နေ့လည် (၂) နာရီမှာ ကူတောင်ရွာမှာ သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သေဆုံးသွားကြသူတွေထဲမှာ ဦးကျော်မင်းထွန်း ဆိုသူဟာ ဇာတ်သဘင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လောင်းချောင်းရွာ က ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ ကူတောင်ရွာက ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားတဲ့ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့က ကူတောင်ရွာ အနီးမှာရှိတဲ့ အနောက်ပြင်ရွာက ရိုဟင်ဂျာ ဘင်ဂါလီတွေနဲ့ ကူတောင်၊ လောင်းချောင်းက ရွာသားတွေ အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက် မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဲဒီ လူ(၁၀) ဦး သေဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒဏ်ရာရသူ (၃) ဦးအနက် (၂) ဦးကတော့ ရသေ့တောင်မြို့ ပြည်သူ့ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသ ခံယူလျှက်ရှိနေပြီး ကျန်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်ဝင်းကိုတော့ အာရုံကြော ထိခိုက်သွားတဲ့အတွက် မနေ့က စစ်တွေဆေးရုံကို ပို့လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေဘက်က သေဆုံးသွားသူနဲ့ ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတော့ စာရင်းအတိအကျ မရရှိသေးပါဘူး။
သေဆုံးသွားကြတဲ့ သူတွေထဲမှာ ကူတောင်ကျေးရွာက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းဟန်ကိုတော့ မနေ့က ဇွန်လ (၂၀) ရက်နေ့ကတည်း က သင်္ဂြိုဟ်လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
ကျန်တဲ့ လူ (၉) ဦး ရဲ့အလောင်းတွေကို အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့က မွတ်ဆလင်တွေက သူတို့ရွာထဲကို သယ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ အလောင်းတွေကို ရခိုင်လူမျိုးတွေ လက်ထဲ ပြန်လည်ရောက် ရှိဖို့အတွက် မနေ့က ရသေ့တောင်မြို့နယ် သံဃာ့နာယက အဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး သံဃာတော်အပါး (၃၀) ခန့်က ဒေသအာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆို ရှာဖွေခဲ့ကြတဲ့အတွက် ဒီနေ့ အားလုံး ပြန်ရခဲ့ တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေ့က ရိုဟင်ဂျာ ဘင်ဂါလ်ီတွေဘက်က သေနတ်အချက်(၂၀) လောက် ပစ်ဖောက်ခဲ့တယ်လို့ ရွာခံတွေက ပြောပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၃ နာရီလောက် အကြာမှာ စစ်တပ်ကရောက်ရှိ ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။
အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းတွေအရ မနေ့က အနောက်ပြင် ကျေးရွာသား မွတ်ဆလင်တွေဆီက လက်နက် (၃) လက် ဖမ်းဆီရမိခဲ့ပြီး အဲဒီလက်နက်တွေကို ဒီကနေ့မှာ စစ်တွေမြို့ကို ဆက်လက် ပေးပို့ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်နက်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ကူတောင် ရဲစခန်းမှူး ဦးသက်ဦးကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ အခု မပြောနိုင်သေးကြောင်း၊ လက်နက်ရရှိတယ် ဆိုတာကို မသိရှိရကြောင်း ဖြေကြားပြီး ဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ သဂြိင်္ုဟ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေ မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာတွေ ပါရှိတယ်လို့ သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုတေးနွယ်အောင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 07:59
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အဓိကရုဏ်းကြောင့် သေဆုံးသူ (၉) ဦး ကူတောင်ရွာမှာသင်္ဂြိုဟ် . All Rights Reserved